Daynsiga Guryaha | Swedbank
Menu for Daynsiga Guryaha
U amaaho gurigaaga
Hadidi aad iibsanaysid guri cusub, qayb siyaada ah dhisaysid, ama aad dabaq iibsanaysid waxaan ku siin karnaa amaahda aad doonaysid. Nala hadal, waxaan kugu caawinaynaa in aad heshid xal sax ah.
Waxaa muhiim ah inaad ku niyad samaato kharashka guryayntaada. Daynta guriga lagu qaataa waa go’aan mudo dheer waxaana lagaaga baahan yahay inaad ribo bixiso si aad u gudo iyo sidoo kale kharashka haysiga. Tani waa sababta waajibinaysa inaad xisaabiso kharashka guryayntaada.
Akhri wax ka badan
Waxaad halkaan ka helaysa maclumaad muhiim ah oo kugu caawini karo sida aad u dhamystiri lahayd iibsashada guriga.